GitHub vs GitLab: tombony sy fatiantoka amin'ireto sehatra ireto | Avy amin'ny Linux
GitHub vs GitLab: tombony sy fatiantoka amin'ireo sehatra ireo
Isaac | | fandaharana
Na dia samy manana ny fitovizany aza izy ireo, na dia amin'ny anarana izay manomboka amin'i Git aza satria samy miorina amin'ny fitaovana fanaraha-maso kinova malaza nosoratan'i Linus Torvalds, fa samy tsy mitovy ny iray na ny iray hafa. Noho izany, ny mpandresy amin'ny ady GitHub vs GitLab dia tsy mazava loatra, manana fahasamihafana vitsivitsy izy ireo izay mahatonga azy ireo hanana ny tombony sy ny fatiantoka ho an'ireo mpampiasa sy mpamorona izay matetika mampiasa azy ireo.
Etsy ankilany, ny mpandrindra sasany dia nifindra tany GitLab tato ho ato, miaraka amin'ny vokany tsara sy ratsy izay ho fantatrao izao. Ny anton'ity hetsika ity dia ny fividianana ny sehatra GitHub nataon'i Microsoft, ary ny fisalasalana nahatonga an'io. Fa raha ny marina dia mbola miasa ara-dalàna izao ny sehatra ...
1 Inona no atao hoe Git?
2 Inona ny GitHub?
3 Inona ny GitLab?
4.1 Ny fahasamihafana GitHub vs GitLab
4.2 Tombony sy fatiantoka ny GitLab
4.3 Tombony sy fatiantoka an'ny GitHub
Inona no atao hoe Git?
git rindrambaiko fanaraha-maso kinova izay noforonin'i Linus Torvalds ho an'ny kernel Linux, satria tsy naharesy lahatra azy ireo programa hafa mitovy amin'izany. Na dia natao manokana ho an'ny tetikasa Linux aza izy io, dia nitarina tamina tetik'asa open source maro hafa ho tombontsoany.
Tamin'ny voalohany, izy io dia nosoratana niaraka tamin'ny fahombiazana, fahamendrehana ary fampifanarahana ho an'ny tetik'asa izay manana rakitra kaody loharano maro an'isa.
Raha ny momba ny rindrambaiko inona fanaraha-maso kinova, ary koa ny VCS, Subversion, CVS, ankoatry ny hafa, rindrambaiko tsotra izao hitantanana ny fanovana izay atao amin'ny singa code code na ny fikirakirana azy. Amin'izany fomba izany, ny ekipan'ny mpamorona tsy miankina izay miasa amin'izany dia afaka mifehy tsara kokoa ary tsy hanitsaka ny asa na hiteraka olana izy ireo rehefa miara-miasa amin'ireo tetikasa ireo ...
Inona ny GitHub?
GitHub dia sehatra fampandrosoana iraisana, antsoina koa hoe forging. Izany hoe sehatra iray mifantoka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpamorona ho amin'ny fanaparitahana sy ny fanohanan'ny lozisialy (na dia niasa tsikelikely aza ho an'ny tetikasa hafa ankoatry ny rindrambaiko).
Araka ny tondroin'ny anarany dia miankina amin'ny Rafitra fanaraha-maso ny kin Git. Noho izany, azo atao ny miasa amin'ny kaody loharanom-pahalalana amin'ireo programa ary manatanteraka fivoarana milamina. Ary io sehatra io dia voasoratra ao amin'ny Ruby on Rails.
Izy io dia manana tetikasa loharano misokatra marobe voatahiry eo amin'ny lampihazo ary azon'ny daholobe idirana. Toy izany ny sandany Nisafidy ny hividy an'ity sehatra ity i Microsoft tamin'ny taona 2018, nanome isa tsy latsaky ny 7500 miliara dolara.
Na eo aza ny fisalasalana momba izany fividianana izany dia nitohy niasa toy ny mahazatra ny sehatra ary mitohy hatrany iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Izy io dia manana tetik'asa manan-danja toy ny kernel Linux ...
Inona ny GitLab?
GitLab safidy hafa amin'ny GitHub, tranokala fanaovana forging hafa misy serivisy web sy rafitra fanaraha-maso ny kinova miorina amin'ny Git ihany koa. Mazava ho azy fa noforonina hananganana tetikasa loharano misokatra sy hanamorana ny fiainana ho an'ny mpamorona izany, saingy misy ny tsy fitovizany amin'ilay teo aloha.
Ity tranonkala ity, ho fanampin'ny fitantanana fitahirizana ary ny fanaraha-maso ny kinova, manolotra fampiantranoana ho an'ny wiki, ary ny rafitra fanaraha-maso bibikely. Fihaingoana feno hamoronana sy hitantanana tetik'asa isan-karazany, satria, toa an'i GitHub, ireo tetikasa izay mihoatra ny kaody loharano dia alefa ankehitriny.
Nosoratan'ny mpamorona Okrainiana, Dmitry Zaporozhets sy Valery Sizov, tamin'ny fampiasana ny fiteny fandaharana Ruby sy ny faritra sasany amin'ny Go. Taty aoriana dia nohatsaraina niaraka tamin'ny Go, Vue.js, ary Ruby on Rails, toy ny amin'ny raharaha GitHub.
Na eo aza ny fahafantarana azy sy ny fifandimbiasana tsara indrindra amin'ny GitHub, tsy dia manana tetikasa firy izy io. Tsy midika akory izany fa tena lehibe ny habetsaky ny kaody fampiantranoana, miaraka amin'ireo fikambanana miankina aminy. avy amin'ny tian'i CERN, NASA, IBM, Sony, Etc.
Izaho manokana dia hilaza aminao aho fa tsy misy mpandresy mazava ao amin'ny GitHub vs ady GitLab. Tsy dia mora loatra ny misafidy sehatra iray izay ambony lavitra noho ny iray hafa, raha ny tena izy, samy manana ny tanjaka sy ny fahalemeny ny tsirairay. Ary hiankina amin'izay tena tadiavinao ny zava-drehetra ka mila misafidy iray na iray ianao.
Ny fahasamihafana GitHub vs GitLab
Na eo aza ny fitoviana rehetra, ny iray amin'ireo fanalahidy rehefa manapa-kevitra ny amin'ny fampitahana GitHub vs GitLab dia mety ny tsy fitoviana eo anelanelan'ny roa:
Haavo fanamarinana: GitLab dia afaka mametraka sy manova ny fahazoan-dàlana amin'ireo mpiara-miasa isan-karazany arakaraka ny andraikiny. Amin'ny tranga GitHub, azonao atao ny manapa-kevitra hoe iza no namaky sy nanoratra ny zon'ny trano fitehirizana, saingy voafetra kokoa izany.
zavatra ilaina: Na dia mamela anao hampiantrano ny atin'ny tetikasa amin'ny sehatra aza ireo sehatra roa ireo, amin'ny tranga GitLab dia ahafahanao mamela anao hampiantrano tena ireo repo anao ihany koa, izay mety ho tombony amin'ny tranga sasany. GitHub dia nanampy an'io endri-javatra io ihany koa, fa amin'ny drafitra karama sasany ihany.
Import sy manondrana: GitLab dia misy fampahalalana tena feno amin'ny antsipiriany momba ny fomba fanafarana tetikasa hamindrana azy ireo amin'ny sehatra iray hafa, toy ny GitHub, Bitbucket, na hitondrana azy ireo any GitLab. Ary koa, raha ny amin'ny fanondranana dia manolotra asa tena matanjaka i GitLab. Raha ny GitHub dia tsy omena ny antontan-taratasy amin'ny antsipiriany, na dia azo ampiasaina ho fitaovana aza ny mpanafatra GitHub, na dia mety ho voafetra kokoa aza ny resaka fanondranana.
fiaraha-monina- Samy manana vondrom-piarahamonina tsara ao ambadik'izy ireo, na dia toa nandresy tamin'ny ady nalaza aza i GitHub. Mampivondrona mpamorona an-tapitrisany izao. Noho izany, ho mora kokoa ny mitady fanampiana amin'io lafiny io.
Dikan-teny Enterprise: Samy manolotra azy ireo raha mandoa ny sarany ianao, ka mety hieritreritra ianao fa tsy misy dikany ny fampitahana GitHub vs GitLab amin'izao fotoana izao, fa ny marina dia manolotra fiasa mahaliana vitsivitsy i GitLab, ary nanjary nalaza teo amin'ireo ekipa fampandrosoana tena lehibe.
Raha tsorina ny tsy fitoviana GitHub vs GitLab dia namintina fa manana an'ity latabatra ity ianao:
firosoana September of 2011 Aprily 2008
Drafitra maimaim-poana Repository ho an'ny daholobe sy tsy miankina tsy misy fetra Maimaimpoana afa-tsy amin'ny trano fitehirizam-bahoaka
Drafitra karama Avy amin'ny $ 19 isaky ny mpampiasa isan-taona ho an'ny drafitra Premium. Na $ 99 isaky ny mpampiasa isan-taona ho an'ny Ultimate. Manomboka amin'ny $ 4 isaky ny mpampiasa ary isan-taona ho an'ny Team, $ 21 ho an'ny Enterprise, na mihoatra ny iray.
Asa fijerena kaody Eny Eny
Wiki Eny Eny
Manara-maso lesoka sy olana Eny Eny
Sampana tsy miankina Eny Eny
Rafitra fananganana Eny eny (miaraka amin'ny serivisy antoko fahatelo)
Tetikasa manafatra Eny No
Tetikasa fanondranana Eny No
Fanarahana fotoana Eny No
Web hosting Eny Eny
Fampiantranoan-tena Eny eny (miaraka amina drafitra fandraharahana)
laza Tetikasa 546.000+ Tetikasa 69.000.000+
Tombony sy fatiantoka ny GitLab
Raha vantany vao fantatra ny fahasamihafana sy ny fitoviana eo amin'ny GitHub vs GitLab, ny tombony sy fatiantoka ananan'ireo sehatra ireo afaka manampy anao hanapa-kevitra izy ireo.
Drafitra maimaimpoana tsy misy fetra, na dia misy drafitra fandoavam-bola aza.
Lisansa loharano misokatra.
Ahafahanao mampiantrano tena amin'ny drafitra rehetra.
Izy io dia mifamatotra tsara amin'ny Git.
Ny interface-ny dia mety ho somary miadana kokoa noho ny fifaninanana.
Misy ny olana mahazatra amin'ny repositories.
Tombony sy fatiantoka an'ny GitHub
Etsy ankilany, manana ny azy koa i GitHub pros sy cons, izay mampiavaka ireto manaraka ireto:
Serivisy maimaimpoana, na dia misy serivisy mandoa aza.
Fikarohana haingana be amin'ny rafitry ny repos.
Fivondronana lehibe ary mora ny mahita fanampiana.
Manolotra fitaovana azo ampiharina amin'ny fiaraha-miasa sy fampidirana tsara amin'i Git.
Mora ampidirina amin'ireo serivisy antoko fahatelo hafa.
Izy io koa dia miasa amin'ny TFS, HG ary SVN.
Tsy misokatra tanteraka izany.
Manana fetran'ny habaka izy io, satria tsy afaka mihoatra ny 100MB ao anaty rakitra iray ianao, raha toa ka voafetra amin'ny 1GB ao amin'ny kinova maimaimpoana ny tahiry.
Araka ny hitanao, tsy misy mpandresy mazava. Tsy mora ny safidy ary, araka ny nolazaiko, dia tokony hanara-maso tsara ny tombony, ny fatiantoka ary ny tsy fitovian'ny tsirairay ianao hahafahana mamantatra hoe iza no tena mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Izaho manokana dia hilaza aminao fa raha te hanana tontolo misokatra tanteraka ianao dia ampiasao tsara kokoa ny GitLab. Etsy ankilany, raha tianao kokoa ny toerana misy anao ary ampiasao ny serivisy web misy anao bebe kokoa dia mandehana mankany GitHub. Hanisy koa antoko fahatelo ary holazaiko aminao fa raha mitady hiasa miaraka amin'ny serivisy Atlassian ianao dia tokony hijery eo anilan'ny Bitbucket...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » GitHub vs GitLab: tombony sy fatiantoka amin'ireo sehatra ireo
Eugenio Miró dia hoy izy:
Tena mahasosotra ahy izany rehefa misy fironana, ary amin'ny maha-mpampiasa ahy roa dia heveriko fa zava-dehibe ny manamarika fa GitHub dia maimaim-poana ho an'ny toeram-pivarotana ho an'ny daholobe sy tsy miankina amin'ny fomba tsy voafetra.
Raha misy fetra ny habe, fa tena ho an'ny serivisy maimaimpoana dia hitako fa mety kokoa noho ny GitLab sy Bitbucket, izay mpampiasa ahy ihany koa aho, indrindra ho an'ny olan'ny fiarahamonina, toy ny misongadina ao amin'ilay naoty.
Amin'ny ankapobeny, tena tsara ny naoty, saingy manenina aho fa hita ny fironana amin'ity tranga ity.
Valiny tamin'i Eugenio Miró
AOS-P3: Fikarohana ny loharano misokatra Apple Open - Fizarana 3